Mapungubwe National Park Hotels - 33 places to stay in Mapungubwe National Park
Read real reviews of Mapungubwe National Park from 18 verified guests.
Easy online booking at 33 hotels options in Mapungubwe National Park. Browse Mapungubwe National Park self-catering, guesthouses, B&Bs and hotels with great rates. Find Mapungubwe National Park holiday accommodation for all tastes and budgets, with TravelGround.com.
Musina (13) Waterspoort (1)
Hotel in Musina, Mapungubwe National Park
Alldays Hotel is situated in the bushveld in the small town of Alldays in the Limpopo Province. The location offers access to the Botswana and Zimbabwe border posts, making it the ideal overnight facility. The hotel...
You are only seeing 2 out of 33 possible results
Hotels within 100 km of Mapungubwe National Park
Lalapanzi Hotel Privaat Huis is situated next to the N1 near Louis Trichardt and offers quality accommodation for a family or group of friends. The house comprises 4 bedrooms and can accommodate up to 6 adults and ...
Hotels within 200 km of Mapungubwe National Park
Hotel in Lowveld, Limpopo